Oukitel K12, oo leh batari 10.000 mAh, ayaa suuqa soo gali doona bisha Juun | Androidsis
Shirkadda Aasiya ee Oukitel ayaa ku dhawaaqday inay ka shaqeyneyso terminal cusub oo ah kuwa na siiya is-maamul madax-bannaan. Waxaan ka hadleynaa K12, terminal leh awood batteri ah 10.000 mAh. Laakiin ismaamulku maahan qodobka kaliya ee xooggan, terminal suuqa soo gali doona bisha Juun.
Oukitel K12 sidoo kale wuxuu u taagan yahay shaashaddiisa 6,3-inch oo leh Full HD + xallinta, iska caabbinta biyaha iyo awoodda lagu kaydiyo mahadnaqa processor-ka Helio P35 ee ka socda MediaTek, oo ay weheliso 6GB RAM iyo 64GB oo ah keydinta gudaha. Hadaad rabto inaad waxbadan ogaato Faahfaahinta Oukitel K12, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
Sida laga soo xigtay soo saaraha, batroolka weyn ee 10.000 mAh ayaa lagu soo oogayaa kaliya 2 saacadood, iyada oo ay ugu wacan tahay nidaamka lacag-bixinta degdegga ah. Waad ku mahadsan tahay is-maamul-goboleedkan, waxaan si fudud u noqon karnaa ku dhowaad hal usbuuc iyada oo aan la xirin terminaalka, taas oo ka dhigaysa tusaale ah in la tixgeliyo haddii aan si joogto ah u baxno dhammaadka usbuuca ama safar oo aanan dooneynin inaan ka warqabno inaan si joogto ah u soo dallacno taleefannada casriga ah.
Dhanka naqshadeynta, Oukitel K12 ayaa na siisa a ku muuji roobka caanka ah ee dusha sare, shaashad leh xallinta 1080 × 2340. Jidhkiisu wuxuu ka samaysan yahay aluminium aluminium ah oo lagu daro maqaarka maqaarka oo siinaya taabasho aad u fiican.
Dhinaca dambe, waxaan ka helnaa a 16 mpx kamarad weyn oo ay soosaartay Sony iyo labaad 2 mpx. Kaamirada loogu talagalay sawir-qaadaha ayaa gaaraya 8 mpx. Dhabarka dambe, waxaan ka heleynaa aaladda sawirka faraha.
Oukitel K12 waxaa loo qorsheeyay inuu suuqa ku dhufto bilowga Juun, waxay taageertaa 4G, 3G iyo 2 G, sidaa darteed waxaan uga isticmaali karnaa waddan kasta oo adduunka ah. Haddii aad xiiseyneyso terminaalkan, Androidsis ayaa si dhakhso leh kuugu wargalin doonta toddobaadyada soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » Oukitel K12, oo leh batari 10.000 mAh, ayaa suuqa soo gali doona bisha Juun
Dib u eegis sameecadaha dhagaha ee Xiaomi AirDots
YouTube Music ayaa noo oggolaan doonta inaan ku ciyaarno muusikada ku keydsan aaladdayada